युभेन्टस लगातार नवौं सिजन सिरी ‘ए’ च्याम्पियन ! - Bigul News
युभेन्टस लगातार नवौं सिजन सिरी ‘ए’ च्याम्पियन !
एजेन्सी – इटालियन जाइन्ट युमेन्टस लगातार नवौं सिजन इटालियन सिरी ‘ए’ को च्याम्पियन बनेको छ । घरेल मैदान एलिएन्ज एरिनामा साम्पडोरियामाथि २–० को जित निकाल्दै युभेन्टस दुई खेल बाँकी छदै सिरी ‘ए’ च्याम्पियन बनेको हो ।
युभेन्टसलाई च्याम्पियन बनाउन क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फेडरिको बर्नरडेस्चीले गोल गरे । रोनाल्डोले एक पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् । घरेलु मैदानमा आइतबार राति भएको खेलमा पाहुना टोलीलाई दवावमा राखेपनि युभेन्टसले गोलको लागि पहिलो हाफको अन्तिम समय नै कुर्नुपरेको थियो ।
२०औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्ने अवर चुकाउदा युभेन्टस अग्रता लिनबाट चुकेको थियो । ४४औं मिनेटमा मिरालेम प्यानिचको पासमा फेडरिको बर्नरडेस्चीको साम्पडोरियाका गोलरक्षक इमिल एयुडेरोले बचाए । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयको थप गरिएको सातौ मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै युभेन्टसलाई १–० को अग्रता दिलाए । मिरोलम प्यानिचको उत्कृष्ट सेट पिस पासमा रोनाल्डोले बटम राइट कर्नरमा गोल गर्न सफल भएको थियो ।
५२औं मिनेटमा साम्पडोरियाका जाकुव जान्कटुले अवसर पाएपनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । ६१औं मिनेटमा रोनाल्डोको प्रहारलाई गोलरक्षक इमिल एयुडेरोले बचाए । ६७औं मिनेटमा फेडरिको बर्नरडेस्चीले गोल गर्दै युभेन्टसको अग्रता दोब्बर पारे । पेनाल्टी बक्स बाहिरको रोनाल्डोको सशक्त प्रहारलाई गोलरक्षक इमिल एयुडेरोले रोकेपनि रिवाउन्डमा फेडरिकोले गोल गर्न सफल भएका थिए ।
७७औं मिनेटमा साम्पडा्ेरिया १० खेलाडीमा समेटियो । मिरालेम प्यानिचमाथि फउल गरेपछि रेफ्रीले मोर्टेन थोर्सवीलाई दोहोरो पहँेलो कार्ड देखाउदै मैदान बाहिर पठाए । ८८औं मिनेटमा युभेन्टसले पेनाल्टी पाएपनि रोनाल्डोले सदुपयोग गर्न सकेन । एलेक्स सान्द्रोलाई डिपाओलीले पेनाल्टी बक्समा लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टीमा रोनाल्डोको प्रहार क्रसबारमा लागेर बाहिरिएको थिए ।
च्याम्पियन बनेको युभेन्टसको ३६ खेलबाट ८३ अंक पुगेको छ । दोस्रो स्थानम रहेको इन्टर मिलानको ७६ अंक रहेको छ । पराजित साम्पडोरिया ४१ अंक जोडेर १५औं स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, साउन १२, २०७७०३:३५
१० घण्टा अगाडि BNCOM
१२ घण्टा अगाडि RT